सत्ता गठबन्धन धेरै समय टिक्दैन : डा. बाबुराम भट्टराई (अन्तर्वार्ता) « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७८, २९ भाद्र १३:२७
काठमाडौं- जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई राजनीतिक शक्ति र परिचर्चाको केन्द्रका पात्र हुन् ।जनचोर्माबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्टराई माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा छन् । कुनै समय थियो, उनलाई नेपाली राजनीतिका दूरदर्शी, पढेका, बुझेका नेता मान्नेको जमात बाक्लै थियो । तर, माओवादी त्यागेर दलबदलमा लागेपछि सर्वसाधारणले समेत भन्न थालेका छन्– ‘भट्टराईको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्‍यो । उनले अस्थिर राजनीति गरे ।’
तर, भट्टराई भने आमनागरिकको बुझाई जस्तो दलबदल नभई आफूले विकास, सुशाशन, समृद्धिका निम्ति खुड्किलो पार गर्दै गइरहेको दाबी गर्छन् । दलबदल, सत्ता सञ्चालन, एमसीसी, सत्ता गठबन्धनलगायत विषयमा गोरखामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग पत्रकार अश्विन दानीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जनमोर्चा, माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा हुनुुहुन्छ । यति धेरै दल बदल किन ?
तर, संघीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद भन्ने हाम्रो नारा तपाईहरूले देख्न सक्नु हुन्छ । यो भनेको नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियान हो । त्यसैले दलबदल होइन, एउटा जनयुद्धको चरणसम्म राजतन्त्र अन्त्य गर्ने र संघीय गणतन्त्र ल्याउने लोकतान्त्रिक क्रान्तिको निम्ति योगदान गर्ने चरणसम्म हाम्रो माओवादी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत लोकतान्त्रिकको एउटा चरण पूरा गरिसकेपछि विकास, सुशासन र समृद्धि जुन मुख्य एजेन्डा बने त्यसका निम्ति यो दोस्रो चरण हो । यसलाई यसरी बुझ्दा उपयक्त हुन्छ ।
होइन, जनयुद्धको एजेन्डा त सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर देशमा जनताले संविधान आफैंले बनाउने र पुँजीवादीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादको बाटो निर्माण गर्ने चरणमा थियो । त्यो लक्ष्य हामीले पूरा गरिसक्यौँ । अब समाजवाद निर्माण पूरा गर्ने अर्को जिम्मेवारी आएको छ । त्यो भनेको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार तयार परे मात्र समाजवाद आउँछ । त्यसैले यो दोस्रो चरणको अभियान र पार्टी निर्माण हो ।
हामी त्यो भन्दा अगाडि बढेर वैकल्पिक शक्ति निर्माणतिर जानुपथ्र्याे । त्यसमा प्रचण्डजी पुरानै ठाउँमा टाँसिएर बस्नु भयो । पुरानै सोच र संगठनले काम नगरेपछि उहाँ बेलाबखतमा यसलाई विखण्ड गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ, त्यो औचित्य सिद्धिसक्यो त हामीले पहिल्यै भनेकै हो । त्यसलाई मानेर उहाँ एउटा समाजवादी नयाँ धु्रवीकरणतर्फ जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।
तपाईले एकपटक गोरखा आएर भन्नुभाथ्यो– बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा नौ अर्ब घोटला भएको छ । मसँग प्रमाण छ, आवश्यक परे सार्वजनिक गर्छु । तर, अहिलेसम्म गुपचुपमै राख्नुभाछ, किन ?
मेरो पहललाई प्रतिशोध लिने ढंगले पछिल्लो सरकारले काम गर्‍यो । खासगरी केपी ओली सरकार यसमा बढी नै मेराविरुद्ध लाग्यो । त्यसकारण गोरखामा भएका बजेट कटौती भए । कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु भएन । खासगरी मेरो पालामा सुरु गरिएका रणनीतिक महत्वका जुन पूर्वाधारहरू थिए, त्यसलाई पूरै काट्ने र बजेट विनियोजन नगर्ने काम भयो । यो गलत थियो । त्यसमा हमेसा निन्दा गर्दै आएकोे छु । गोरखाका जनताले पनि अरुसरह नै कर तिर्दै आएका छन् । त्यसको हिस्सा गोर्खाली जनताले पाउनुपर्छ । यहाँका विकास परियोजना बजेट कट्टी गर्न पाइँदैन र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ अडान छ ।